Manchester United Iyo Manchester City Oo Diyaar U Ah Inay Lasoo Wareegaan...
Manchester United iyo Manchester City ayaa labadoodaba lagu soo waramayaa inay awood u leeyihiin inay u dhaqaaqaan saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee West Ham United Declan Rice .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England waa ciyaaryahan loo baahan yahay ka dib xilli ciyaareed kale oo guulo leh oo uu ku gaadhay London Stadium markii ugu dambeysay.
Sidoo kale kasbashada xiriirrada u wareegista labada nin ee Manchester, Rice sidoo kale waxaa lagu xantaa inuu ku jiro liiska bartilmaameedyada Chelsea .
Sida laga soo xigtay The Athletic , Chelsea ayaa hakad gelisay inay u dhaqaaqdo taas ayaana u ogolaatay United iyo City inay ka sarre maraan Blues tartanka loogu jiro saxiixa 22 jirkaan.
Inkastoo labada dhinac midkoodna uusan weli sameynin qaab rasmi ah, waxaa la sheegaa inay labaduba si firfircoon u raadinayaan u dhaqaaqista Rice, kaasoo xirfadiisa oo dhan ku qaatay West Ham.
Rice ayaa la filayaa inay bilawdo furitaanka England ee furitaanka Euro 2020 oo ay wajihi doonaan Croatia garoonka Wembley Axada.
Related Topics:CiyaarahaFeaturedWararka CiyaarahaWararka Maantawararka maanta ciyaarahaWararka-maanta.net
Maxaa Ku Soo Kordhay: Liverpool Iyo Wararka Suuqa Kala Iibsiga Bisha June,…
Wararka Maanta : Faahfaahino kasoo baxaya goobo ganacsi oo lagu boobay dalka Koofur Afrika
Wararka Maanta : Wadani iyo Ucid oo ku guuleystay maamulka Burco iyo Laascaanood - Caas...
Wararka Maanta : DF oo shaacisay qorshaha ka dambeeya kulankii Rooble iyo Safiirka Imaa...
Wararka Maanta : Coca-Cola oo Balaayiin Doollar Ku Weyday Fal uu Cristiano Ronaldo Sameeyay Awgii